Maxamed saalax oo Ballon d’Or ku guulaysanaya in shakhsiyaad caan ah oo urajeeyay – Daily Som
Maxamed saalax oo Ballon d’Or ku guulaysanaya in shakhsiyaad caan ah oo urajeeyay
By Staff on April 23, 2018 No Comment
Xidiga Xulka qaran Masar iyo Kooxda Liverpool ayaa ku guulaystay xidiga ugu wanaagsan xili Ciyaareedkaan horyaalka dalka Ingriiska gaar ahaan abaalmarinta PFA.
ciyaariyahan ayaa waxaa wayn ubogaadiyay kabtanka kooxda reds asiga oo ku tilmaamay mid la mid ah xidiga kubada haystay 10 ki sano ee ugu dambeeyay caalamka ee Vristiono Ronaldo iyo lionel Messi.
“Messi iyo CR7 waxey heerkaan ku jireen 10-sanadood iyo wax ka badan, balse Salah waa mid ku wanaagsan inuu heerkaan joogo isla markaana joogteeyo hormarka” ayuu yiri
sidoo kale waxaa ku booriyay xidigii hore ee kooxda ugana ciyaari jiray No. 10 Luis García asiga oo sheegay in sanadkaan uu heesto xidiga reds Frsad uu kaga dulqaadi karo Ronaldo iyo Messi Abaal marinta Ballon d’Or hadii uu sii joogteeyo Goolasha iyo caawimaad uu siinayo Kooxda.
“Messi iyo Ronaldo waa kuwa ugu fiican muddo dheer, laakiin waxaan qabaa in Salah uu dagaal la gali karo, ma dhahayo wuxuu ku guuleysan doonaa Ballon d’Or, balse dhinaca kale haa, hadii uu Liverpool kula guuleysto Champions League, wuxuu u heli doonaa fursad weyn”. ayuu yiri Luis García
Ugu dambayn waxaa uhamblyeeyay Saaxiibiisa Xulka Qaranka Masar una ciyaara Kooxda arsinal Mohamed Elneny oo ciyaartii ugu dambaysay dhaawac halis ah sio gaaray waxa uuna “Hambalyo saaxiibkii aan jeclaayow, waad u qalantaa”
Maxamed saalax oo Ballon d’Or ku guulaysanaya in shakhsiyaad caan ah oo urajeeyay added by Staff on April 23, 2018